अहिलेसम्मकै ठुलो संकटमा फेसबुक : आइपर्याे यस्ताे समस्या , माेबाइलमा खुल्छ ,डेस्कटपमा खुल्दैन ! « Channel Np
अहिलेसम्मकै ठुलो संकटमा फेसबुक : आइपर्याे यस्ताे समस्या , माेबाइलमा खुल्छ ,डेस्कटपमा खुल्दैन !
प्रकाशित मिति : Friday, March 15th, 2019 at 5:13 PM
म्यासेन्जरको मोबाइल एपले कतै कतै काम गरेको छ तर उसको डेस्कटप संस्करणमा भने समस्या देखिएको छ। ह्वाट्सएपमा यसको असर देखिएको छैन। ‘फेसबुकका विभिन्न एपहरूमा कतिपय मानिसले पहुँच पाउन नसकिरहेको बारे हामीलाई जानकारी छ। हामी ती समस्या छिटै समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ,’ फेसबुकले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।